Misoro yeMiddle East, ndeapi iwo? | Absolut Kufamba
Middle East misoro
Alberto Makumbo | | Ijipiti
Kunyangwe paine rusaruro rwakawanda ruchiri kukurudzira pakati pevamwe vafambi, Middle East ndiyo kona yepasi rakakanganiswa neicho exoticism uye mashiripiti akajairwa Husiku hweArabia iyo inotsvanzvadzira muchimiro chemasikiti akanaka, mabhezari emamiriyoni churu uye vanhu vanogamuchira vaenzi. Usapotsa rwendo urwu rwe misoro yeMiddle East.
1 Riyadh (Saudi Arabia)
2 Manama (Bahrain)
3 Abu Dhabi (United Arab Emirates)
4 Baghdad (Iraq)
5 Jerusarema (Israel)
6 Amman (Jorodhani)
7 Kuwait (Kuwait)
8 Kuenda Beirut (Lebanon)
9 Muscat (Omani)
10 Doha (Qatar)
11 Dhamasiko (Siria)
12 Sanaa (Yemeni)
13 Cairo (Egipita)
14 Tehran (Iran)
15 Ankara (Teki)
Kunyange isiri iyo inonyanya kufarirwa yeiyo misoro yeMiddle East, Riyadh inogadzira mosaic yezvinokwezva zvakakodzera kushanya. Kubva mukukudzwa kwayo dunhu remari kusvikira Masmak castle, kuenda nemamiriro ekunze e Kingdom Center, Riyadh inofungidzira kuti guta rakaita kupokana.
Kusiyana nedzimwe nyika dzakavakidzana senge yakasimba Saudi Arabia, Bahrain yechitsuwa inowana mumusoro wayo, Manama, imwe yeiyo mazhinji epasi rose epasi penyika dzeArabhu. Tsika dzayo dzakasiyana, dunhu rezvemari rakavakwa nekuda kwehupfumi hwemafuta kana zvidhori zvakakurisa senge Al-Fateh musikiti vanoumba rimwe remaguta anonyanya kufarira muPersian Gulf.
Kunyangwe Dubai chiri chakakurumbira kumeso cheUnited Arab Emirates, Abu Dhabi inoramba iri mucherechedzo mukuru wezvehupfumi. Guta rakazvarwa kubva kumusha mudiki wehove mu chitsuwa chakaita saT uko mahotera, mamosikiti ayo egoridhe, ayo epamberi akadana Cornice kana chirongwa chedhorobha chinotyisidzira kupinda muzvimwe zviwi zvinoumba muenzaniso wakanaka wekunaka kweArabhu. Pasina kupokana, imwe yeiyo misoro mikuru inonakidza yeMiddle East.
Inofungidzirwa imwe yeiyo epicenters huru dzeArabhu dzeAkare, Baghdad nhasi ndeimwe yeiyo mashoma akashanyira maguta kuMiddle East asi izvo hazviregi kuva zvinonakidza. Yayo inozivikanwa mbiri-nhanho bhiriji, iyo Iraq Nhoroondo Museum kana mukurumbira Baghdad Shongwe ingori mimwe mienzaniso yekunaka kweguta rino rakashatiswa nehuipi hwenyika.
Musimboti werudzi rweIsrael rwunonakidza sekukakavara kwarwo, Jerusarema rinofadza kwete chete revateveri vechiKristu, asi nenhoroondowo zvayo. Hapana chinhu chiri nani kupfuura kukurudzira chishamiso chakavanzika che Kuchema madziro, fungisisa zvinonakidza Shongwe yaDavidi kana kufamba munzira dze Gomo reMiorivhi kunakidzwa neguta iro rinopfuura makore zviuru zvishanu gare gare rinoenderera rakafanana neNhoroondo.
Usati wasvika kunzvimbo sedzakakurumbira Petra guta, guta guru reJoridhani ndiyo yakanakisa chikonzero chekurasika pakati pezvikwiriso, mabhawa uye zvisaririra zveimwe nguva. Tsvaga runako rwe Hercules Tembere, iyo nhoroondo kuburikidza neayo Archaeological Museum uye, pamusoro pezvose, maonero kubva kuCitadel uko kunogara kubva kune yemhando yepamusoro yemitambo yeRoma kusvika kumamosque ekurara.
Kwemakore mazhinji, guta guru reKuwait raive rimwe remasangano makuru ekutengeserana pakati peIndia neMiddle East kudzamara rakundwa nesimba reBritain Humambo mushure meHondo Yenyika Yekutanga. Chokwadi indian simba, iro guta rinotenderera nemusikiti waro mukuru kana dzimwe shongwe dzemureza mumakutu makuru ekumabvazuva senge Liberation Tower kana iyo Kuwait Towers yezita rimwe chete.
Kuenda Beirut (Lebanon)
Known as «iyo Paris yeMiddle East«, Guta reLebanese isanganiswa yakakwana yezvazvino uye tsika nekuda kwenzvimbo dzakaita senge Al Hamra nharaunda, nzvimbo yemashopu nemikafi inoyevedza, zvinoyevedza Mohammad al-Amin mosque kana, kunyanya, iyo National Museum yeBeirut, uko kubva kuGreek amphorae kuenda kuByzantine archaeology inoramba iripo.
Inofungidzirwa imwe yeiyo nyika zhinji dzine runyararo kuMiddle East, Oman inomutsa mufambi muchimiro chemusoro mukuru seMuscat. Chiratidzo chekubwinya kweArabhu, iro guta rakabatwa pakati pegungwa nerenje rine nzvimbo dzekufungidzira senge Sultan Qaboos Mosque, chishamiso chemamiorera, zvakavezwa zvakavezwa uye makenduru senge chero imwe, inozivikanwa yayo Opera kana Al Alam Palace.
Kutarisana nePersian Gulf, Doha ndeimwe yeiyo mureza maguta eMiddle East nekuda kwekusiyana kwayo kwakakura, kubva kudunhu rayo rezvemari kusvika kuCorniche, nharaunda yakazivisa nharaunda nyowani dzemangwana, kana hombe Souq Wasif, imwe yemasokisi anotyisa kwazvo munyika dzeArabhu. Yakanaka kushanyira panguva refu kurevera.
Nezvakawanda kupfuura Makore zviuru zvina enhoroondo, Dhamasiko rinoonekwa seimwe yemaguta ekaresa pasi rose. Guta rakaona nhaka yaro iri munjodzi mumakore ekupedzisira eHondo Yenyika iyo yakanganisa nzvimbo Dhamasiko Guta Rekare, seti yemasikiti, maberere uye madziro eRoma akachinja kuita icon yeguta uye Nhaka Yenyika in 1979.
Chimwe chei maguta ekare anonakidza ndiyo Yemeni Sana'a, rine guta rekare, rine simba reEthiopiya, Ottoman neMuslim, iri akatyisidzira nekuda kwemakakatanwa mazhinji anotyisidzira nzvimbo iyi, sekuyambira komiti ye Unesco muna 2015. Inodanwa Arab Guta Guru retsika muna 2004, Sana ndiko kunakidzwa kwakadzikira kwenzwi.
Kunyangwe hazvo guta guru reEjipitori rine chikwereti chakakura kumapiramidhi ari padyo kana rwizi rweNile rwatova chiratidzo cheEjipitori, Cairo ine hunhu hunotsausa avo vanoiwira. Rimwe remaguta makuru enyika yeArabhu ne Africa rinotenderera nengano Saladin Citadel, iri pachikomo, masikiti akaita sa Muhammad Ali kana a Museum yeEjipitori iva chiratidzo chevanoda nhoroondo.
Inowedzera kuvhurika kwekushanya, nyika yeIran inoburitsa zvishongo zvakavanzika zvakavanzwa kusvika zvino nemisoro yakaipa uye inonyengedza mushanyi wese achitsvaga runako rweZviuru neUmwe Usiku. Zvibvumire iwe kuwira yake Grand bazaar, uye zvinongedzo kune zvinozivikanwa Golestan Muzinda kupedzisa kufunga nezve maonero akanaka eguta kubva kuMilat Tower.
Ipo Istanbul ichimiririra iyo inoshamisa uye inonakidza Turkey, iro guru rechokwadi rinovanza mamwe matombo akakosha anofanirwa kucherechedzwa. Kubva ku Anitkabir mausoleum kusvika kune mukurumbira wake Museum yeMagariro, Anakara inosimbisa kugona kweiyo hofori yeTurkey seyakakwana kubatana pakati peEast neEast.
Neipi yeiyi misoro yeMiddle East unogara here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Middle East misoro
Iyo Shongwe yePisa
Mabhichi akanakisa pasirese